ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိုဒေါင်တည်နေရာများ သြစတြေးလျ (ဆစ်ဒနီနှင့်ပါ့သ်), အမေရိကန်နိုင်ငံ (LA)၊ ကနေဒါ (တိုရွန်တို) နှင့်ဂျပန် (Saitama နှင့် Nara)၊ တိုကျိုမှသြစတြေးလျသို့အပတ်စဉ်ပို့ဆောင်သည်။
မရရှိနိုင်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်များကိုဂျပန်နှင့်ဥရောပတစ်လွှားတွင်အကောင်းဆုံး Shear ပေးသွင်းသူများကိုကျွန်ုပ်တို့အဆက်မပြတ်ရှာဖွေသည်။
Japan Scissors ၏ရည်မှန်းချက်မှာပရီမီယံသောကတ်ကြေးများကိုဝယ်ယူရန်ဖြစ်သည် Yasaka ဂျပန်, Joewell, Ichiro ဂျပန်စသည်တို့ကိုပိုမိုတတ်နိုင်နှင့်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်။
မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပါ Instagram၊ Facebook သို့မဟုတ်ရိုးရိုး rနေပြည်တော် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏ထုတ်ကုန်။ :)
ကျွန်ုပ်တို့၏ကတ်ကြေးများသည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တစ်သက်တာထုတ်လုပ်သူအာမခံကိုပေးသည်။
အွန်လိုင်းကတ်ကြေးနှင့်ညှပ်များကို ၀ ယ်ရန်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကတ်ကြေးနှင့်ထုတ်လုပ်သူမှချို့ယွင်းချက်များရှိပါက၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်ပို့နိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုအစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဒီဇိုင်း၊ ပစ္စည်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်သောလက်မှုပညာတွင်အရည်အသွေးမြင့်သည်။ ဒေါ်လာထောင်ချီမပေးပါနဲ့ စျေးနှုန်းချိုသာသောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သောကတ်ကြေးများနှင့်ညှပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကက်တလောက်သည်ရာဂဏန်းတွင်မပါရှိသော်လည်းအရည်အသွေးတစ်ခု၊ လူကြိုက်အများဆုံးစတိုင်နှင့်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းတစ်ခုစီကိုရွေးချယ်ထားသည်။ ရိုးရှင်းရှငျဘုရငျဖွစျသညျ!
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးသာ! စုံတွဲတစ်တွဲစီသည်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆိုချွတ်ယွင်းသည်။ ပြissuesနာဖြစ်ရင်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ချို့ယွင်းချက်အတွက်တစ်သက်တာအာမခံ။
ကျနော်တို့ကတ်ကြေးတွေသိတယ်၊ ငါတို့ဂျပန်ဒီဇိုင်းကိုသိတယ်။ Japan Scissors သည်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်လုပ်ငန်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရပြီးစကားပြောရတာကိုနှစ်သက်ကြတယ်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်မှုများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။ ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်ထံကျွန်ုပ်တို့ပြန်လာပါမည်။